Ny fanenjehana ny Kristianina tany Nizeria | Apg29
Ny antony fa ny Kristianina no enjehina any Nizeria ny Islamista ny fampahoriana.
Indrindra fa any amin'ireo fanjakana roa ambin'ny folo any amin'ny faritra avaratr'i Nizeria misy lalàna Sharia Mandresy ny nanakana ny Kristianina manam-pahefana avy amin'ny fiainana ny finoany avy.
Ny famonoana iraika ambin'ny folo Kristianina
Vao haingana, dia nanoratra mikasika ny famonoana ny iraika ambin'ny folo Kristianina izay nitranga tamin'ny andro Noely 2019. iray tamin'izy ireo voatifitra ary ny iray halvshöggs folo . Ny lahatsoratra dia manana ny fotoana nanoratana efa maherin'ny 5600 antokony ao amin'ny Facebook. Ny famonoana olona dia ataon'ny Boko Haram, izay eo ambany fanjakana Silamo ao Nizeria.
Misy 195.9 tapitrisa ao Nizeria izay ny isan'ny Kristianina dia 91.100.000. Nizeria ny fivavahana silamo sy ny Kristianisma. Ny Lalampanorenana System dia repoblika federaly.
Izany no hita indrindra ao amin'ny faritra avaratr'i Nizeria, izay ny finoana silamo no fivavahana lehibe indrindra, raha mbola Kristianisma ny ankamaroan'ny olona any amin'ny tany atsimo. Ny fifandrafiana eo amin'ny foko tany avaratra sy ny atsimo mandray anjara amin'ny fanenjehana ny Kristianina.
Ny fanenjehana in Nizeria
Ny ankamaroan'ireo Kristianina dia ao amin'ny faritra atsimon'i ny firenena, momba ny fahalalahana ara-pivavahana, fa ny Kristianina tany avaratra sy ny fehikibo dia iharan'ny herisetra amin'ny vondrona Islamista.
Io herisetra matetika miteraka ny fahaverezan'ny na fiainana sy ny fananana, ary koa ara-batana fahasimbana. Vokatry ny herisetra ny Kristianina koa ny noroahina hiala ny tany, amin 'izany very ny asa fivelomany.
Ny Kristianina any amin'ny faritra avaratr'i Nizeria, indrindra ao amin'ny fanjakana Sharia, hita toy ny kilasy faharoa-olom-pirenena, miatrika fanavakavahana sy ny fanilikilihana avy amin'ny fiaraha-monina.
Kristianina avy amin'ny fototra silamo ihany koa miatrika ny fandavana avy amin'ny fianakaviany sy ny fanerena hiala Kristianisma.
Ohatra ny silamo fanenjehana ny Kristianina
Ao amin'ny fanafihana tanàna Kristianina iray tamin'ny Febroary 2018 106 ny olona maty. Boko Haram tao ambadiky ny fanafihana, izay manokana mivantana manohitra ny lehilahy ao an-tanàna.
Roa mpisorona fito ambin'ny folo sy mpivavaka no namoy ny ainy, rehefa nisy fiangonana katolika no nanafika ny fulaniherdar nandritra ny fanompoam-pivavahana maraina tamin'ny Aprily 2018. Taorian'ny fanafihana nanome ny Raiders ny fiaraha-monina sy ny trano rava tanteraka 60 tamin'ny tany rehefa avy norobaina azy.
Tamin'ny Jona 2018 ny Kristianina 120 nahafaty ny fulaniherdar. Ireo niharam-boina ireo teny an-dalana hody avy amin'ny fandevenana rehefa nanafika. Ny fiangonana nisy andro fanompoam-pivavahana noho ny tahotra ny hisian'ny fanafihana hafa.
Tamin'ny andro Noely 2019 namono amin'ny alalan'ny fanapahan-doha ny Kristianina iraika ambin'ny folo sy ny tifitra.
V 02, lördag 16 januari 2021 kl 00:27